သတင်း – Page2– media sport
ခွေးထက်မိုက်ရိုင်းသောလုပ်ရပ် လပွတ္တာမြို့နယ် ၌ အသက် ( ၈၇ ) နှစ်အရွယ် အဖွားအိုအား အဓမ္မပြုကျင့် ခံရ မှု ဖြစ် ပွား
[Zawgyi]ခွေထက်မုက်ရိုင်းသောလုပ်ရပ် လပွတ္တာမြို့နယ် ၌ အသက် ( ၈၇ ) နှစ်အရွယ် အဖွားအိုအား အဓမ္မပြုကျင့် ခံရ မှု ဖြစ် ပွား 12-5-2018 ည (၈ )နာရီအချိန် မှာလပွတ္တာမြို့ နယ် အုန်းတပင် ကျေးရွာ အုပ် စု အောင် လှ ကျေးရွာ နေ. အဖွားအို ဒေါ် ခွေးမအသက် (၈၇)နှစ် အား အဓမ္မပြု ကျင့် မှုဖြစ် ပွားဖြစ် စဉ် မှာ 12-5-2018 နေ့ အဖွားအို မှ သားရှိရာလယ် ကွင်းသို့ သွား ရောက် နေထိုင် ပြီး ၎င်း ညမှာပဲသားဖြစ် သူမှ စားရင်
[Zawgyi]မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွား မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်အနီး ပလက်ဝမြို့နယ် အထက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) တို့ မေလ ၁၄ ရက်နေ့က ထပ်မံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း AA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းတိုက်ပွဲမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄)ရက်နေ့၊ နံနက်(၈) နာရီခန့်မှစ၍ ကုလားတန်မြစ်၊ အရှေ့ဖက်ကမ်း၊ ကုန်ပြင်ရွာအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တိုက်ပွဲသည် နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီခန့်အထိ တိုက်လိုက် နားလိုက်ဖြင့် အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်မတော်ဘက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများရှိကြောင်း၊ အလောင်း အချို့ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း၊ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း အေအေ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်
ပစ္စည်းများကို တာဝန်သိတတ်စွာဖြင့် ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့သည့် ရေခဲတိုက်အလုပ်သမား ဗိုက်ကလေး၏ အကျင့်စာရိတ္တအား လေးစားဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပုံနှင့်တစ်ကွ တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
[Zawgyi]သေသူရဲ့ တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းတွေကို ရိုးသားစွာပြန်ပေးခဲ့သူ ရင်ခွဲရုံအလုပ်သမားလေး ပဲခူးပြည်​သူ့​ဆေးရုံကြီးတွင်​ဆေးကုသမှုခံယူရင်းပျံလွန်တော်မူသွားသော ဥူးဇင်းတစ်ပါးအား ပဲခူး​ဆေးရုံကြီး​​ ရေခဲတိုက်သို့ ပို့​ဆောင်​ရာတွင်​ ​ရေခဲတိုက်တာဝန်ခံဗိုက်​ကလေးမှ ဥူးဇင်းသင်္ဃန်းထဲတွင်​ ပါလာသောပစ္စည်းများဖြစ်သည် ။ ဥူးဇင်းသင်္ဃန်းထဲမှတွေ့ ရှိသော ပစ္စည်းများမှာ (၁) ရွှေဆွဲကြိုး​လောကတ်​သီးပါ (၁)ကျပ်​သားခန့်​တစ်​ကုံး (ခန့်​မှန်းအ​လေးချိန်​)(၂) လက်​စွပ်​ (၂)ကွင်း (အ​လေးချိန်​မသိ)(၃) နားကပ် ​(၁)ရံ (အ​လေးချိန်​မသိ)(၄) ငွေသား (၁)သိန်း (၅)သောင်း (၇၀)ကျပ်​(၅) ယ္ခုလထီလက်​မှတ်​ (၁)အုပ် တို့အား ရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိပြီး တာဝန်​သိတတ်​စွာဖြင့်​ ​သေဆုံးသူ ဥူးဇင်း၏သား/သ္မီးများဖြစ်​သူ ​မြေတိုင်း(၁၇)တွင်​နေထိုင်သည့်​ ကိုကြည်​+​ဒေါ်ရင်​​ရွှေ၏ လက်ဝယ်သို့ ဖြူစင်၊မြင့်မြတသော စိတ်ထားဖြင့် ပြန်လည်​ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်​။ ယ္ခုကဲ့သို့​ ဆွေမျိုးများမ​ရောက်​ခင်​​တွေ့ရှိထား​သော ပစ္စည်းများကို တာဝန်​သိတတ်​စွာဖြင့် ပြန်​လည် ပေးအပ်​ခဲ့သည့်​​ ရေခဲတိုက်​အလုပ်​သမား ဗိုက်​က​လေး၏ အကျင့်စာရိတ္တအား​ လေးစားဂုဏ်​ယူစွာဖြင့်​ ပုံနှင့်​တစ်​ကွ
တိုက်တိုင်းနို င် တဲ့ တပ်မ ၈၈ ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်း ကို သိပြီးပြီ လား.?
[Zawgyi]တိုက်တိုင်းနို င် တဲ့ တပ်မ ၈၈ ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်း ကို သိပြီးပြီ လား တိုက်တိုင်းနိုင်တဲ့တပ်မ ၈၈ ရဲ့သမိုင်းအကျဉ်းကိုသိပြီးပြီလားတပ်မအမှတ် (၈၈) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကို ၁၉၆၇ခုနှစ် ၊ မေလ (၁)ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် ။ ယင်းတပ်မဌာနချုပ်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် တပ်မမှုး ၊ ကြည်း-၅၆၀၃ ဗိုလ်မှုးကြီးသန်းတင်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး လက်အောက်ခံ စုစုပောင်းတပ်ရင်း (၁၀)ရင်းအား တာဝန်ယူ ကွပ်ကဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ တပ်မစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၁၉၆၇ ခုနှစ် မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထိ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်လည်းကောင်း ၊ ၁၉၉၀ မှ ယနေ့အထိ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ အမှတ် (၈၈) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊
[Zawgyi]၄ တ န်းပါ..ကိုယ်​၀န် ​က ၈ လ ပါ တဲ့ မွေးစား ဖို့ ပေး တာ မွေးစား တဲ့ သူ က စော်ကားတာ တဲ့ ဒီသမီးငယ်​က​တော့ ကူညီ​ပေးခဲ့ဖူးသမျှထဲအငယ်​ဆုံးစံချိန်​ပါပဲ.. ၄ တန်းပါ..ကိုယ်​၀န်​က ၈ လပါ.. သူ့ဇာတ်​လမ်း​လေးကလည်း ဆင်​ခြင်​စရာပါပဲ.. မိဘ​တွေက ဆင်းရဲလွန်း​တော့ သမီး​လေးကို တင့်​တင့်​တယ်​တယ်​​လေးထားနိုင်​​အောင်​ ဟိုးငယ်​ငယ်​ထဲက ​မွေးစားမိဘ​တွေလက်​ထဲ ​မွေးစားဖို့​ပေးထားတယ်​.. အဲဒီ​မွေးစား အ​ဖေက သမီး​လေးကို ​စော်​ကားတာပါ.. ဒီစာ​တွေ ၊ ဒီအ​ကြောင်း​တွေကို ကျွန်​​တော်​ မ​ရေးချင်​.. လူ​တွေက ကြား​တောင်​ မကြားချင်​တဲ့ ဒီအ​ကြောင်း​တွေကို ကိုယ်​က အမြဲတမ်း နှဖူး​တွေ့ဒူး​တွေ့ ကြုံ​နေရသူမို့ နှလုံးပို နာပါတယ်​..
မိန်းမ က လိင် ဆက်ဆံ ဖို့ငြင်း ခဲ့ တြာေ ကာင့် သူ့ ရဲ့လိင်အ င်္ဂါ ကိုဖြတ် ပစ် ခဲ့ တဲ့ အမျိုးသား
[Zawgyi]မိန်းမ က လိင် ဆက်ဆံ ဖို့ငြင်း ခဲ့ တြာေ ကာင့် သူ့ ရဲ့လိင်အ င်္ဂါ ကိုဖြတ် ပစ် ခဲ့ တဲ့ အမျိုးသား သင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို နှစ်တွေအများကြီးကြာအောင် အသုံးမပြုရရင် လွှင့်ပစ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ဒါပေမယ့် ဒါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တွယ်ဆက်နေရင်ကော ဘယ်လိုလဲ။ ဒီလင်မယားမှာ လက်ထပ်မှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အိန္ဒိယက ၃၇နှစ်အရွယ် Ghasi Ram ဆိုသူက ဆယ်စုနှစ်ကြာအောင် သူ့မိန်းမကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့ငြင်းခဲ့တဲ့အတွက် မချင့်မရဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ လိင်အင်္ဂါက်ုဖြတ်ခဲ့ပြီး သူမကသူ့ကို နားမလည်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူမကအရမ်းခေါင်းမာပါတယ်တဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ မဆက်ဆံခဲ့ရပါဘူး။လက်ထပ်ထားတာလည်း ၁၇နှစ် ၁၈နှစ်ရှိပါပြီ လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူက သူ့မိန်းမနဲ့အတူမအိပ်ရရင်လိင်အင်္ဂါမရှိတာပိုကောင်းမယ်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သူအရက်မူးနေခဲ့ပြီး သူ့မိန်းမကငြင်းတဲ့အခါ မီးဖိုချောင်သုံးဓားနဲ့ သူ့ အင်္ဂါကိုဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာ
ပြည်တွင်းစစ် ကိုေ လယာဉ် သုံး လို့ဆိုပြီး လူ မဆန်ဘူး ဆိုတဲ့ အော်သံလေးေ တွ ကို Kia လော်ဘီေ တွအော်နေပြန် ပါပြီ
[Zawgyi]ပြည်တွင်းစစ် ကိုေ လယာဉ် သုံး လို့ဆိုပြီး လူ မဆန်ဘူး ဆိုတဲ့ အော်သံလေးေ တွ ကို Kia လော်ဘီေ တွအော်နေပြန် ပါပြီ တပ်မတော်က လေယာဉ်ရှိလို့လေယာဉ်သုံးတာဆန်းသလား။ အခုဟာက လေကြောင်းနဲ့တိုက်ရင်အော်ပြီ။ လေကြောင်းကပစ်ကူပဲပေးတာပါ။ မြေပြင်ကိုတကယ်သိမ်းရတာက မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေပါ။ မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေ ကျား ထိုးသံကြားတာနဲ့ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ မင်းတို့အဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပြန်ပြီးပြုပြင်လိုက်ပါဦး။ အမေရိကန်က ဗင်လာဒင် ရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုသမခဲ့လဲသိလား။ သူတို့စခန်းတွေကို မဇိုင်းဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာလား။ ခြေလျင်တပ်တွေနဲ့တက်သိမ်း တာလာအရင်လေ့လာပါ။ မူဆယ်ကိုနှစ်ခါဝင်စီးပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသတ်သွားကတည်းကစစ်ရေးမဟုတ်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေ အရပ်သားတွေကိုသတ်တဲ့အမှု နဲ့စစ်ပွဲဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ လို့သတ်မှတ်လို့ရနေပြီဆိုတာသိသလား။ ပြန်မေးမယ် မင်းတို့ အဖွဲ့တွေ မူဆယ်မှာလုပ်သွားတဲ့လုပ်ရပ်ကရော လူဆန်လို့လား။ လက်နက်မရှိတဲ့သူကိုလက်နက်ရှိတဲ့သူက အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်တာ လူယုတ်မာတွေအလုပ်ကွ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ တပ်စခန်းတွေကိုသွားတိုက်ပါလား။ ဖင်တောင်ပြဲသွားအုံးမယ်။ တပ်မတော်မို့လို့ ညှာတာပြီး K 8